အမြိုးသမီးမြားအတှကျ Annunciation မှာမှော်ဘာသာရေးထုံးတမ်း
အဆိုပါ Annunciation မှာဘာသာရေးထုံးတမ်း - သင်ချမ်းသာကြွယ်နှင့်သုခချမ်းသာများအတွက် Annunciation မှာလုပျနိုငျ rituals ဘာလဲ?
ရှေးခေတ်ကကတည်းကလူတွေအယူမှားအစဉ်အလာပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာသောကွဲပြားခြားနားသောထုံးတမ်းအဘို့ဘာသာရေးအားလပ်ရက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ရိုးရာ kitty ခုနှစ်တွင်အသက်တာ၏ကွဲပြားခြားနားသောနယ်ပယ်များတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲအောင်ကူညီပေးဖို့ထုံးတမ်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမင်္ဂလာဗာဂျင်း၏ Annunciation မှာဘာသာရေးထုံးတမ်း
ဒါဟာအဘို့သန့်ရှင်းသောနေ့ရက်မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်းယုံကြည်ရသည်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုးတော်အားဖြင့်စလှေတျတျောအပေါငျးတို့သတောင်းဆိုမှုများကိုကြားပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Annunciation မှာရိုးရာထုံးတမ်းအခြို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုဆိုလို:
ဒါဟာအားလုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ disconnect ရာများအတွက်သင့်လျော်သောအခြေအနေများဖန်တီးရန်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ဒါသူတို့အာရုံကြသည်မဟုတ်, နှင့်စွမ်းအင်လွှဲပါဘူး။
အဆိုပါ Annunciation မှာဘာသာရေးထုံးတမ်းယခင်တဦးတည်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည်။
စည်းစိမ်ဥစ္စာအပေါ် Annunciation မှာဘာသာရေးထုံးတမ်း
ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရိုးရာဓလေ့ဖျော်ဖြေဖို့, သင်အားလပ်ရက်မတိုင်မီသုံးရက်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုခင်ပွန်းကိုထောက်ပံ့ပေးလျှင်, အမြိုးသမီးတသူ့အဘို့မအုပ်ထိန်းသူစေသည်။ အဆိုပါ Annunciation မှာစည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ရိုးထုံးတမ်းစဉ်ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်အပေါ်ဖျော်ဖြေနေသည်:
ဖြူသောအဝတ်စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းယူပါ အနီရောင်တစ်ဦး string ကို ပိုက်ဆံ၏အဓိကသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်ရာနှင့်အရွက် Clover ။ ကနျြးမာရေးရဲ့သင်္ကေတ - ဆဲယုံကြည်မှုနှင့်တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, တစ်ဦးငွေရောင်ဒေါနကိုယ်စားပြုထားတဲ့ပိတ်ပင်အရွက်, လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတစ်အိတ်ထွက်လှည့်နိုင်အောင်အားလုံးအပင်, အချည်စွန်းကိုစုသိမ်းနှင့်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်, လက်သုတ်ပဝါပေါ်တွင်တင်ကြသည်။ ဒါဟာသုံးမိုင်စေရန်အရေးကြီးပါသည်။
အဆင်သင့်ရပ်ကွက်ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ pillowcase ထဲမှာထားလေ၏။ သင်အိပ်ရာပိတ်ချောကိုပြောင်းလဲလျှင်အိတ်၏ status စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သူကအဝါရောင်ပြောင်းသွားနှင့်အရသာဆုံးရှုံးလျှင်, ထိုသူသည်မိမိအလုပ်ပြုတော်မူပြီ, ထိုသို့အိမ်တော်အပြင်ဘက်တွင်မီးရှို့ရမည်။
အိမျထောငျရေးအတှကျ Annunciation မှာဘာသာရေးထုံးတမ်း
အဆင်းလှသောလိင်၏အတော်များများကကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝစီစဉ်နှင့်အတန်းမှာမသှားနိုငျသောအမှန်စင်စစ်မှတွေ့ကြုံနေကြသည်။ တစ်ဦးခြားနားချက်စေနိုင်သည်ဖြစ်သော Annunciation မှာအမျိုးသမီးအခမ်းအနားများရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, မစိတ်ပျက်လက်ပျက်လုပ်ပါ။ မကြာမီလက်ထပ်ဖို့, ဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ:
အတူတကွအစေ့ရင်ဘတ်ဆန့်ကျင်ဖိထားတဲ့ကာလအတွင်းအသင်းတော်၌အစေခံသှားဖို့သူမ၏လိုအပ်ချက်, အတူ။ အိမ်ပြန်မပြောမည်သူမဆိုရန်အရေးကြီးပါသည်။
Annunciation လက်ထပ်ထိမ်းမြားအပေါ်ရိုးထုံးတမ်းစဉ် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအခြေအနေရောဂါပိုး၏ထွန်းနှင့်အတူပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ Annunciation မှာဘာသာရေးထုံးတမ်း
အထီးကျန်မိန်းကလေးတစ်ဦးရိုးရှင်းသောရိုးရာဓလေ့လူတို့အားပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာဖို့, တစ်လျောက်ပတ်သောလူနှငျ့အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုအဘို့မိမိတို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်အတူနိုင်ပါတယ်။ Annunciation ထုံးတမ်းအောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါကအလွန်ရိုးရှင်းပြီးသူတို့ထဲကတစျခုအတှကျနေသောခေါင်းစဉ်:
သုံးလက်ဆေးရေထဲမှာနှိုးပြီးနောက်နံနက်၌တည်၏။ ပထမဦးစွာ - ဤအဘယ်သူမျှမဖွင့်မဖွစျသငျ့ရှေ့တော်၌ထိုရိန်းကနေနဂိုအတိုင်း, ဆိုလိုသတည်း။ သငျသညျရေနံ add ဖို့လိုအပ်ဒုတိယထ, တတိယအရည် - သန့်ရှင်းသောရေ ။ စကတ်ကိုယ်ပိုင်ရှပ်အင်္ကျီသုတ်ရပါမည်။
အဆိုပါ Annunciation မှာရိုးရာဓလေ့ကိုဆက်လက်အနီရောင်အတွင်းခံအဝတ်အစားဝတ်ဆင်အလင်းစေ-Up နှင့်ဆံပင်မနှင့်သူ၏လက်ဝဲဘက်ခြေဖြင့်သေချာပေါက်မွန်းတည့်ချိန်အထိလမ်းပေါ်မှာထွက်ရဖို့။
ဒါဟာကျောက်ကပ်သည်ထင်ရှားရာမဆိုအပင်တစ် sprig ယူရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာကူးပြောင်းနေရာသို့မဟုတ်အနမ်းထားတဲ့မေတ္တာ၌စုံတွဲတစ်တွဲ, ဆက်စပ်ရပါမည်။ သငျသညျအိမျတျောကိုတစ် sprig ထားရန်နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ၌ဘူးသီးပွင့်အခွအေနေကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်သည့်အခါလိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Annunciation မှာကလေးတစ်ဦးထင်၏ဘာသာရေးထုံးတမ်း
ဗာဂျင်းယုံကြည်သူများ၏အဓိကမိခင်များအတွက်လိုအပ်သောကြောင့်ကမ္ဘာ့ကယ်တင်ရှင်ကိုပေး၏, ထို Annunciation အောင်မြင်သောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအဘို့အထုံးတမ်းလုပ်ဆောင်သွားရန်ရန်စံပြအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဗိမာန်တော်သို့သွားနှင့်ဝန်ခံ, ဖြစ်နိုင်သမျှဆိုးကျိုး၏စင်ကြယ်စေရသောရန်အကြံပြုသည်။
အဖြူရောင်ချိုးငှက်ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှေ့တော်၌ထိုရိုးရာဓလေ့များအတွက်ပဏာမပြင်ဆင်မှုနေ့ကိုပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်၏ Annunciation မှာဘာသာရေးထုံးတမ်းထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ငှက်အိမ်မှာညဉ့်ကိုဆက်လက်တည်ရှိရပါမည်။
အဲဒါကိုကလေးတစ်ဦးအဘို့အမြင့်မားအင်အားကြီးဆန္ဒရောက်စေဖို့တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ သင်ဆဲနေတဲ့လိင်ညွှန်ပြမှတ်စု, မျက်စိအရောင်ဇာတ်ကောင်နှင့်အနာဂတ်ကလေးငယ်၏အခြားအင်္ဂါရပ်များကိုရေးနိုင်ပါတယ်။
ထိုအခါသင် Pat, ပြီးတော့သင်၏လက်ကိုကိုင်ထားမိမိအစာအိမ်အပေါ်သင့်တယ်, ထွက်သွားနှင့်တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ Annunciation များ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်အခမ်းအနားများ
တည်ဆဲရောဂါများတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်ယေဘုယျကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ရည်ရွယ်ထုံးတမ်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Annunciation မှာမှော်ဘာသာရေးထုံးတမ်းကြီးမားတဲ့အာဏာရှိသည်, ဒါကြောင့်သူတို့မကိုယ်တိုင်သာကကူညီရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများ။
သင့်အနေဖြင့်ရေအကြို dial နှင့်နံနက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဘို့ဘုရားကျောင်းသူမ၏နှင့်အတူအားလပ်ရက်အပေါ်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူမ၏သွားလာရင်းအိမ်မှာပြီးနောက်လိုအပ်ချက်အတွက်သုံးလူတွေကိုဆွမ်းပေးခြင်းရန်သေချာစေပါ။
မူလစာမျက်နှာ, အအနုတ်လက္ခဏာကိုဖယ်ရှား, ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ် Annunciation ရေတိုင်အောင်စိုနေတဲ့ရေချိုးခန်းယူပါ။
သင်သည်သင်၏အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်အားသွင်းဖို့လိုအပ်ပါကကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ကြောင်းပြီးနောက်, ဥပမာ, တစ်ဦးဟာသ watch, သူဒါပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သွားနှင့်ဖို့ likes အဘယ်အရာကိုလုပ်ပါ။
စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပျေါ Annunciation မှာဘာသာရေးထုံးတမ်း
၎င်းတို့၏ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရှာတွေ့နှင့်အခြားပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်အလို့ငှာ, အဘယ်သူမျှမကံကောင်းပါစေမပွုနိုငျသညျ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အက Annunciation နှင့်ဆား၏ Annunciation အထူးပြင်ဆင်မှုများ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုလုပ်ဖို့ဘယ်အရာကိုအခမ်းအနားများသိရန်လိုအပ်ပေသည်။ နေထွက်မှာနံနက်မှာတော့ပုံမှန်စားပွဲပေါ်မှာဆားတစ်ဗူးကို ယူ. တစ်ပတ္တူအိတ်ထဲသို့သွန်းလောင်း။ 10 မိနစ် preheated မီးဖို၌ထားလေ၏။ အဆင်သင့်ဆားချက်ပြုတ်အတှကျအသုံးပွုနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်သန့်စင်စက်ရုံများဖယ်ရှားပစ်ရန်ထုံးတမ်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Annunciation ၏မိသားစုထဲမှာကမ္ဘာ၏ဘာသာရေးထုံးတမ်း
အသက်တာ၏နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အတော်များများစုံတွဲများကိုမှန်မှန်တိုက်ခြင်းနှင့်အခြားပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရ, နားလည်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ မကြာခဏဤအအနုတ်လက္ခဏာအပြောင်းအလဲများကိုမိသားစုများပြိုကွဲနေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုဦးတည်သွားစေ။ ဤအခြေအနေမှရှောင်ရှားရန်, ကဇနီးမောင်နှံမှငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ချစ်ခြင်းဆောင်ကြဉ်းကူညီပေးဖို့ Annunciation မှာဘယ်အရာကိုအခမ်းအနားများသိရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ရှေးခေတ်ကကတည်းကရုရှားနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုတင်ဆက်ရိုးရာဓလေ့:
မိမိခင်ပွန်းဘို့ပြင်ဆင်ညစာအတွက်ထားရပါမည်သည့်အချို့ကုန်ကြမ်းဂျုံ, ပြင်ဆင်ပါ။ အဆိုပါ Annunciation မှာရိုးရာဓလေ့ကြောင့်စပါးစိမ်ရန်နှင့်စကားပြောဆိုရန်အရေးကြီးပါသည်, အသက်သာချောင်ချိရေးအတှကျလုပျဆောငျခဲ့။ သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောပြပါ။ အဲဒီနောကျအားဖြင့်မြေတပြင်လုံးရုပ်ရှင်ဖယ်ရှားခြင်း, ရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်။
စပါးကိုကျော်ရေသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ထိုသူတို့အားကောင်းသောစကားများပြောနေ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ဆက်ဆံရေးအတွက်အောင်မြင်ရန်နှင့်သင့်အလိုဆန္ဒများကိုဖော်ပြချင်သောအရာကိုတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်၏မတ်ေတာကိုပြောပြပါ။
မဟုတ်သေချာပေါက်ကတော့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမှသူတို့ဟင်းလျာများအပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်တရားစွဲဆိုအရာကိုလုံလောက်စွာသောကွောငျ့, ဘောဇဉ်ကိုစားကြ၏။ ကောကျပဲသီးနှံဘောဇဉ်စားပွဲ၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါပန်းကန်ထဲမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သင့်သည်။
တစ်ဦးဆန္ဒပြည့်စုံဖို့ Annunciation အတွက် RITES
ဤကွီးစှာသောခရစ်ယာန်အားလပ်ရက်များတွင်လူတစ်ဦးချင်းစီကသူ့အချစ်ဆုံးသောအိပ်မက်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူမြင့်မားအာဏာအယူခံဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာသူမအဘယ်သူမျှမကိုမကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်လေးနက်ခဲ့တာပေါ့အရေးကြီးသည်, မဟုတ်ရင်သင်ဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်ရလိမ့်မည်။ သင် Annunciation မှာအခမ်းအနားများအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ထွက်ရှာပါ, ကတာရှည်အချစ်ဆုံးသောအလိုဆန္ဒအကောင်အထည်ဖေါ်ကူညီပေးသည်တဲ့ရိုးရာဓလေ့ကိုဖော်ပြရကျိုးနပ်သည်။ ဒါဟာကျပွညျ၌ကဤနေ့၌ယုံကြည်နေသည် ကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလ , သူသည်အားလုံးယုံကြည်သူများ၏တောင်းဆိုမှုများကိုကြား။
အဆိုပါ Annunciation မှာသန့်ရှင်းသောဘာသာရေးထုံးတမ်းကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အတူဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အရုဏ်မှာရိုးရာဓလေ့ထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
လမ်းပေါ်မှာထွက်နှင့်အရှေ့ facing ရပ်တယ်။ ကိုယ်တော်တိုင်သုံးကြိမ်ကူးနှင့်အထူးကြံစည်မှုဟုဆိုသည်။
အဆိုပါ Annunciation အပေါ်ကုန်သွယ်များအတွက်ဘာသာရေးထုံးတမ်း
အတော်များများကထုံးတမ်း, စီးပွားရေးအတွက်ရေးရာပြည်နယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နှင့်အသစ်သောဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်။ ဆိုင်ထဲမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ Annunciation မှာဘာသာရေးထုံးတမ်းပိုင်ရှင်များနှင့်ရောင်းသူနှစ်ဦးစလုံးမှထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တင်ပြရိုးရာဓလေ့တစ်ခါသာကြာနှင့်သူကကုန်ပစ္စည်းမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ကနေအကျိုးခံစားရဖို့ကူညီပေးသည်။ အရုဏ်မှာဖယောင်းဘုရားကျောင်းဖယောင်းတိုင်ထွန်းညှိခြင်းနှင့်သကြားတစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းကိုးဆကြံစည်မှုဖတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ဝယ်လက်ဆွဲဆောင်နိုင်အောင်, ကောင်တာမှာသေးငယ်တဲ့အိတ်နဲ့ဝှက်ထဲမှာထားပါ။
ကနျြးမာရေးအတွက်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု - ရောဂါလက္ခဏာနှင့်မည်သို့ဖယ်ရှားပစ်ရန်?
"Ladder" တက်မြန်းသည့်နေ့များ - ပူးပေါင်းကြံစည်မှု
မိမိလက်နှင့်အဆောင်လက်ဖွဲ့ motanki အရုပ်
အတ္ထုပ္ပတ္တိ Lindsay Lohan
"နံနက်စတား" ဖြစ်စေခဲ့သည်, သင်ကအကြောင်းမေ့လျော့ထားတဲ့ 15 အဆိုတော်,!
ရောမ Rihanna နှင့်လီယိုနာဒို - အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
Curling Basal အသံအတိုးအကျယ်
Paul Walker မတော်တဆမှုခဲ့ - ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များ
အိမ်မှာပြဇာတ်ရုံအတှကျအ projector ကို - ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့?
Adidas ပြေးဖိနပ် 2015